You're Hired - အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on November 7, 2011 at 13:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-2 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.
After firing WebWare’s sales director and advertising the new post. Philip Hart and Marcia Boardman discuss the applications and decide on an interview format.
(Webware ကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းဒါရိုက်တာအား အလုပ်ဖြုတ်၍ အလုပ်နေရာသစ်အတွက် ကြော်ငြာထည့်ပြီးနောက် Philip Hart နှင့် Mercia Boardman တို့သည် အလုပ်လျှောက်သူများ အကြောင်းဆွေးနွေးကြပြီး လူတွေ့မေးခွန်းပုံစံကို ဆုံးဖြတ်နေကြသည်။)
Philip Hart : So, how many applications did we get, Marcia? (ကဲ၊ အလုပ်လျှောက်လွှာ ဘယ်လောက်ရလဲ မာစီယာ?)
Marcia Boardman : Well…overall we’ve got over two hundred… (အင်း… အားလုံးပေါင်း ကျွန်မတို့ နှစ်ရာကျော်လောက်ရတယ်…)
PH : That many!? (အဲ့ဒီလောက်တောင်များတယ်!?)
MB : Yes, but…most of which we can discard right away…people who don’t have the right experience, qualifications that kind of thing. (ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကိုတော့ ကျွန်မတို့ ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်လို့ရနိုင်ပါတယ်…. လိုအပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူတွေ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့…)
PH : Of course… (ဒါပေါ့။)
MB : … and then we get the people who submit ten-page-long CVs, or CVs in comicbook font, or green ink, or they attachaphoto of themselves disco dancing you know the kind of things! (ပြီးတော့ ၁၀ မျက်နှာရှည်တဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တင်တဲ့သူတွေ၊ ကာတွန်းဆန်တဲ့ စာလုံးပုံစံ မဟုတ်ရင် မှင်အစိမ်းနဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေ၊ ကပွဲရုံမှာ ကနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံတွေကို တွဲပြီးတင်ပေး လိုက်တဲ့သူတွေ… အဲဒါမျိုးတွေ ရှင်သိပါတယ်။)
MB : So, I whittled down the serious candidates toashortlist of twelve people.
(အဲ့ဒီတော့ ကျွန်မအရည်အတွက်လျှော့ချလိုက်တာ တည်ကြည်လေးနက်တဲ့ လျှောက်လွှာရှင် ၁၂ ဦးကို ပဏာမဆန်ခါတင်ရွေးထားပါတယ်။)
PH : And we’ll interview all of them? (အဲ့ဒီတော့ အကုန်လုံးကို လူတွေ့စစ်ဆေးမှာလား?)
MB : I think we should – but obviously I’ll let you havealook first. (ကျွန်မကတော့ လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင့်ကို အရင်ဦးဆုံးပေးကြည့်ဦးမှာပါ။)
PH : Great… so, who have we got then? (ကောင်းပြီ … ငါတို့ဘယ်သူတွေရလဲ?)
MB : Well, I think we’ve got some pretty strong candidates, two in particular… (အင်း၊ ကျွန်မတို့ တော်တော်ကောင်းတဲ့လျှောက်လွှာရှင်တွေပါပါတယ်၊အထူးသဖြင့်နှစ်ယောက်ပေါ့.)
PH : They have the right kind of profile? (သူတို့က လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေပါကြရဲ့လား?)
MB : I’d certainly say so –astrong educational background, experience in multinational sales, language skills… (ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ပြည့်စုံတယ် လို့ပဲပြောချင်ပါတယ် - အားကောင်းတဲ့ပညာရေးနောက်ခံသမိုင်း၊ နိုင်ငံတကာအရောင်းအတွေ့အကြုံ ၊ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု………)
PH : Good, I look forward to meeting them. (ကောင်းပြီ။ သူတို့ကို တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။)
MB : So I’d say we do the standard interview format. (ဒါဆို ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း စံပုံစံ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။)
PH : Sure… (ကောင်းတာပေါ့။)
MB : A few general questions, then onto specifics… (အထွေထွေမေးခွန်းနည်းနည်းမေး ပြီးတော့မှ အသေးစိတ် ကိုဆက်ကြတာပေါ့…)
PH : Yes, exactly – I want to hear specific details of when they’ve solved problems… (ဟုတ်တယ်။ အသေအချာပဲ၊ သူတို့ ပြဿာနာတွေကို ဖြေရှင်းခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ သိချင်တယ်……..)
MB : Yes and then something about “vision”, as you put it… (ဟုတ်ပါပြ၊ီ ပြီးတော့ ရှင်ပြောခဲ့တဲ့ “အမြင်” ဆိုတာရောပဲပေါ့…….)
PH : Yes…what do you think aboutabrief presentation? (ကောင်းပါတယ်။ တင်ဆက်မှု အတိုလေးတစ်ခုလောက် လုပ်ခိုင်းရင်ရော ဘယ်လိုနေမလဲ?)
MB : I think that’sagood idea – we could ask them to giveashort presentation on where they see the company going – and how they see themselves taking us there. (ကျွန်မကတော့ ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီ ဘယ်ကိုဦးတည်နေပြီး သူတို့က ကျွန်မတိုို့ အဲဒီကိုရောက်အောင် သူအနေနဲ့ဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ဆက်မှု အတိုလေး လုပ်ခိုင်းလိုက်ရအောင်။)
PH : Great! You know something? I’m really looking forward to this. (ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါကို ကျွန်တော်ကတော့ တကယ့်ကိုမျှော်လင့်စောင့်စားနေပါတယ်။)
Permalink Reply by 2lta3xnkewunm on November 16, 2011 at 11:45
အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ ။ ကျွန်တော်တို့လို့ လေ့လာတဲ့ လူတွေအတွက် အရမ်း အကြိုးအမြတ်ရှိပါသည်ဗျာ ။
Video File လေးကို ဘယ်လို download ဆွဲလို့ရမလဲ ခင်ဗျာ ။ video လေးနားထောင်ပြီး listing လေးလုပ်ချင်လို့ပါ။
အဲဒါဆိုရင် ပိုပြီးတေ့ာ ထိရောက်မယ်လို့ မြန်ဆန်မယ်လို့ထင်လို့ပါ ခင်ဗျာ
Permalink Reply by khinelay on November 5, 2012 at 11:43
Download လုပ်တာက Internet Download Manager နဲ့လဲ ရပါတယ်
Permalink Reply by Young B on December 6, 2014 at 11:48
IDM နဲ့ Download လုပ်လို့ရပါတယ်
Permalink Reply by Queen on November 17, 2011 at 11:13
Many thanks for your lessons.I'd like to ask some problem which to get download this file.I found that download link when I click this video play button.It's open asanew window.IF so,Could I use realplayer?Is it ok ?
Permalink Reply by 124v2txjez7kr on November 29, 2011 at 20:54
အကြံပြုပါရစေ real player download ထားပါ။
Permalink Reply by July Moe on December 7, 2011 at 19:35
Video File လေးကို ဘယ်လို download ဆွဲလို့ရမလဲ ရှင် ။နည်းလေးပြောလို.ရမလားမသိဘူး။ ဒီက connection နဲ.ဆို download ဆွဲလိုလွယ်ဖို. Mp3 file လေးနဲ. ထပ်တင် ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းမှာပဲ။့ ပိုဆင်ပြေမယ်ထင်လို.ပါ။
Permalink Reply by mhonpwintphyu on March 16, 2012 at 14:21
I like this lesson but I read and I have not listen .
I want to download or buy , where?
Permalink Reply by Master Learner on April 12, 2012 at 12:29
အရမ်းကောင်းတဲ့ Post ပါ။
Permalink Reply by Yu Mon Aung on October 28, 2012 at 17:00
this program is very nice. it can make us to really improve english skill.
Permalink Reply by mudita on May 31, 2015 at 13:42
This's very good program.